Ihe nrụpụta ụlọ vinyl plank nke ụlọ SPC kacha mma na ụlọ nrụpụta | Iverson
Ala SPC bụ ngwaahịa nke teknụzụ na amamihe. Ọ na -enye ngwakọta nke akwa dị iche iche, elu mkpuchi, akwa ịdị ọcha transperent pvc na -eyi oyi akwa, ihe nkiri e biri ebi dị elu, isi SPC na ogbi ogbi. SPC na -anọchi anya 'ihe mejupụtara plastik nkume' ma ọ bụ 'ihe mejupụtara polymer nkume'. Karịsịa, limestone, nke bụ onyinye inorganic. Ọ na-ewe 50-70% nke ọdịnaya ụlọ. Ndị ọzọ bụ PVC na stabilizer. N'ezie onye njikwa mmepụta ụlọ ọrụ ọ bụla na -ekpebi oke nke na -eme nnukwu ọdịiche na ịdị mma.
N'eziokwu, a na-ahụ ala ụlọ SPC dị ka ihe dị elu ụlọ dị n'ahịa. Ọ bụ ezie na osisi ndị ahụ dị gịrịgịrị, ha nwere nnukwu nguzogide na ịdịte aka. Ọdịdị dị mma nke akwa oyi akwa na -eme ka ọ ghara iguzogide iyi, nke na -akọwa oke ojiji ya na gburugburu azụmahịa yana ebe nnukwu okporo ụzọ. E wezụga nke ahụ, mkpuchi UV ya na -eme ka ọnya elu ya na -eguzogide nke dabara adaba maka ndị mmadụ nwere nnukwu anụ ụlọ. Ala ụlọ SPC nwere njupụta dị elu, njirimara ndị a na -eme ka ọ na -adịgide adịgide.
N'ihi 100% mmiri anaghị egbochi mmiri, mmiri agaghị eme ka ala zaa, gbajie ma ọ bụ bee ọzọ. Ọ pụtara ihe n'ezie. N'ihi uru ndị a pụrụ iche, ndị mmadụ na -eji ala spc amụbawanye na kichin ha na ime ụlọ ịsa ahụ. Ihe mkpuchi pụrụ iche na -emekwa ka ala na -emegide mgbochi ka ị na -ezute mmiri. Ebe ọ bụla mmiri nwere ike bụrụ nsogbu, spc floor bụ ezigbo nhọrọ. Ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ụlọ oriri na ọ areụ areụ na -abụkarị azụmahịa abụọ na -ahụkarị maka iji ala ụlọ SPC. Underlayment bụkwa nhọrọ maka nkasi obi kachasị na njikwa ụda.
Ọ bụrụ na ị na -achọ imezigharị ala ụlọ gị, tụlee ụlọ ala SPC. N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị bụ naanị onye nrụpụta ala SPC na onye na -eweta ọkachamara nke nwere ike inyere gị aka ịchekwa oge na ego gị. Anyị ga-achọ ịbụ onye na-ebubata ndabere gị, kpọtụrụ m maka nlele efu yana ọnụ ahịa ụlọ nrụpụta iji nweta nkwupụta.
Nke gara aga: SPC flooring siri ike isi n'ijikọta Pịa mkpọchi ịkwanyere Vinyl flooring
Osote: Ntọala SPC Pịa ijikọ ya na nkwado Ixpe
4mm Spc n'ala
Spc n'ala 4mm
SPC flooring isiike Core n'ijikọta Pịa Loc ...
Vinyl Dị ọnụ ala Fireproof Vinyl Pịa SPC flooring
Ihe mkpuchi ala WPC nke PVC rụchara arụpụta